နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနှင့်အတူ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ဥက္ကဌ ဦးသောင်းထွန်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဘူဒါပက်စ်မြို့၌ ဟန်ဂေရီလုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ဟန်ဂေရီ-မြန်မာ စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် “ယခုဖိုရမ်သည် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လိုသူများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် များစွာအထောက်အပံ့ပြုမည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း”
“တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများသည် လူဦးရေ ၃.၅ ဘီလီယံ ရှိသောစျေးကွက်ကို ကိုယ်စားပြုနေသည့်အတွက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် မဟာဗျူဟာကျ သည့် စျေးကွက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရုံသာမက ပထဝီအနေအထားအရ အချက်အခြာကျစွာ တည်ရှိပါ ကြောင်း”
“မြန်မာ့လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ကျော်မှာ အသက် ၃၀ နှစ်အောက် လူငယ်ပညာတတ်များ ဖြစ်သည့်အတွက် လုပ်သားအင်အား ပေါကြွယ်ဝပါကြောင်း”
“မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ သစ်တောနှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလားအလာကောင်း များစွာရှိပါကြောင်း”
“မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒေသတွင်းစျေးကွက်နှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတို့ကို ချိတ်ဆက် ခြင်းဖြင့် အာရှပစိဖိတ်ဒေသသာမက ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရပ်ဝန်းကိုပါ ချဲ့ထွင်သွား နိုင်မည်ဟု အခိုင်အမာ ယုံကြည်ပါကြောင်း”
“ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက် “Single-Window” စနစ်ကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း”
“မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအတွက် လုပ်သာကိုင်သာရှိသော ကြိုတင်ခန့် မှန်းနိုင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်းကျင်ကောင်း ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း”
“ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် အီလက် ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ်ဖြစ်သည့် MyCo တည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း”
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များအားလုံးကို ရရှိနိုင်မည့် စီမံကိန်းဘဏ်(Project Bank) ကိုလည်း ဖော်ဆောင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း၊
တာဝန်ယူမှုရှိပြီး အရည်အသွေးရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ခြင်းမှ မျှတပြီး ကြွယ်ဝသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ရပ် ဖန်တီးရန်နှင့် တွန်းအားပေးလည်ပတ်သည့် မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း (Myanmar Investment Promotion Plan-MIPP) ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း”
“ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွက် ဗဟိုဒေသတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် proactive နည်းလမ်းဖြင့် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း”
“ယခုဖိုရမ်သည် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ အဓွန့် ရှည်တည်တံ့အောင်ဖော်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ၏ ၂၉ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်းRotary Club of Central Yangon ၏ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
Keynote speech by H.E. U Thaung Tun, Union Minister for Investment and Foreign Economic Relations, Government of the Republic of the Union of Myanmar on the occasion of the Launch of the 2nd OECD Investment Policy Review of Myanmar and High-level National Conference on Responsible Business Conduct
H.E. DAW AUNG SAN SUU KYI, STATE COUNSELLOR “MYANMAR-JAPAN INVESTMENT DIALOGUE ON ECONOMIC RECOVERY AFTER COVID-19 AND NEW INVESTMENT OPPORTUNITIES” KEYNOTE SPEECH
H.E. U THAUNG TUN, MINISTER OF INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS “MYANMAR-JAPAN INVESTMENT DIALOGUE ON ECONOMIC RECOVERY AFTER COVID-19 AND NEW INVESTMENT OPPORTUNITIES” SPEECH AND PRESENTATION
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES VIRTUAL ASEAN CONFERENCE 2020 ECONOMIC PILAR DAY “INSPIRING THE PRESENT, ENVISIONING THE FUTURE”